Vanokosha Mota Vagadziri & Vatengesi | China Yakakosha Mota Fekitori
Yakakosha Mota iri kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri anorema ayo anosanganisira rori yepamusoro yekuita rori, kurwisa moto rori, marori marori uye zvichingodaro.Pano tinokurudzira edu erori anoshanda rori uye moto kurwa rori kutanga
Dongfeng 5-6 matani furo moto rori inogadziriswa neDongfeng EQ1168GLJ5 chassis. Iyo mota yese inoumbwa neyeanodzima moto mupanda wevapfuuri nemuviri. Chikamu chevapfuuri mutsetse mumwe chete kuenda kumutsara wakapetwa, unogona kugara vanhu vatatu + vatatu.
Redu remvura tangi rori remoto rinoshandurwa neDongfeng EQ1041DJ3BDC chassis. Motokari inoumbwa nezvikamu zviviri: muputi wevanodzima moto nemuviri. Chikamu chemutakurwi mutsetse wepakutanga wakapetwa uye unogona kugara vanhu 2 + 3. Iyo mota ine yemukati tangi dhizaini.
Iyo yepamusoro yekukwirisa mashandiro mota ine mukana uyo mamwe emuchadenga basa michina isingagoni kuenzanisa, ndiko kuti, inogona kuita marefu-kure mashandiro uye inofamba kwazvo, ichifamba kubva kune rimwe guta kuenda kune rimwe guta kana kunyangwe nyika. Iine chinzvimbo chisingachinjike mumasevhisi mashandiro.
Yedu yemuchadenga keji rori ine maficha e1.Boom uye vanobuda kunze vakagadzirwa neyepasi-alloy Q345 profiles, isina masimbi kumativi ese, akanaka muchimiro, muhombe mune simba uye akakwirira musimba; 2. H-zvakaumbwa outriggers vane kugadzikana zvakanaka, ivo outriggers anogona kuvhiyiwa panguva imwe chete kana yoga, oparesheni iri kuchinja, uye inogona kuchinja kuti siyana kushanda ezvinhu; 3. Iyo slewing mashandiro inotora inochinjika mhando, iri nyore kuti kugadzirisa; 4. Iyo turntable inotenderera 360 ° mumativi ese maviri uye inotora yepamusoro turbo-honye mhando yekudzora mashandiro (iine yega-yekuzora uye yekuzvivharira-mabasa). Post-kugadzirisa inogona zvakare kuwanikwa nyore nekugadzirisa chinzvimbo chemabhaudhi; 5. Iyo yekubhodha oparesheni inotora iyo yakasanganiswa yemagetsi kudzora vharuvha block mode, ine yakanaka dhizaini, kugadzikana mashandiro uye nyore kugadziriswa; 6. Kuburuka nekuenda zvakabatana, mashandiro acho akachengeteka uye akavimbika; 7. Pasina danho rekumhanyisa mirawo rinowanikwa kuburikidza neiyo vharuvhu vharuvhu panguva yekubhodha basa; 8. Bhasiketi yakaturika inotora yekunze tambo tsvimbo yekumakanika kuenzanisa, inova yakagadzikana uye yakavimbika; 9. Iyo turntable kana yakaturika tswanda yakagadzirirwa kutanga uye kumira switch, izvo zviri nyore kushanda nekuchengetedza mafuta; Rori redu rekurwa nemoto rakakamurwa kuita furo moto kurwa rori uye mvura tangi moto kurwisa rori. Iyo yakagadziridzwa kubva kuDongfeng EQ1168GLJ5 chassis. Iyo mota yese inoumbwa neyeanodzima moto mupanda wevapfuuri nemuviri. Chikamu chevapfuuri mutsetse mumwe chete kuenda kumutsara wakapetwa, unogona kugara vanhu vatatu + vatatu. Iyo mota ine yakavakirwa-mukati matangi chimiro, chikamu chepamberi chemuviri bhokisi remidziyo, uye chikamu chepakati itangi remvura. Chikamu chekumashure ndiyo imba yepombi. Iyo tangi-inotakura tangi inogadzirwa yemhando yepamusoro kabhoni simbi uye ine elastically yakabatana kune chassis. Iko kutakura kwemvura inokwana 3800kg (PM50) / 5200kg (SG50), uye iro furo remvura vhoriyamu iri 1400kg (PM60). Iyo yakagadzirirwa CB10 / 30 yakaderera kumanikidza inogadzirwa neShanghai Rongshen Moto Kurwisa Equipment Co, Ltd. Iyo pombi yemoto ine yakayerwa kuyerera kwe30L / S. Denga racho rakagadzirirwa PL24 (PM50) kana PS30W (SG50) mota yemoto yekutarisa inogadzirwa naChengdu West Fire Machinery Co, Ltd. Chinhu chakakura mumota chihombe chemvura chinokwanisa, kudzora kwakanaka uye nyore kugadzirisa. Inogona kushandiswa zvakanyanya mukuchengetedzwa neruzhinji moto mabrigadhi, mafekitori uye zvimbambaira, nharaunda, dhoko nedzimwe nzvimbo kurwisa mwero wakakura wemafuta kana moto wezvese zvinhu. iyo chassis yapfuura yenyika inomanikidzwa chigadzirwa chitupa; iyo injini inoburitsa inosangana nezvinodiwa zvechishanu chikamu chikamu cheGG17691-2005 (National V standard); mota yese yapfuura kuongororwa kweNational Fire Equipment Quality Supervision uye Inspection Center (Report No .: Zb201631225 / 226) uye yakaverengerwa mukuzivisa kwezvinhu zvitsva zvemotokari neBazi reIndasitiri neRuzivo Technology.